Real Madrid oo badalka Cristiano Ronaldo ka dooneysa kooxda Manchester United – Gool FM
(Real Madrid) 20 Nof 2018. Kooxda Real Madrid ayaa rajeyneysa inay xoojiso safkeeda inta lagu jiro suuqa xagaaga ee soo aadan, si ay u sameyso saxiixyo waaweyn ee muhiim ah, gaar ahaan ka dib markii ay ku fashilantay inay sameyso saxiix muhiim suuqii lasoo dhaafay.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda reer Spain ee Real Madrid ay qorsheeneyso in ay aduun dhan 90 milyan ginni ay kulaa soo saxiixato weeraryanka Manchester United ee Marcus Rashford iyo xidiga khadka dhexe kooxda Tottenham Hotspur Christian Eriksen.
Sida laga soo xigtay wargeyskan, Real Madrid ay daawatay qaab ciyaareedka Marcus Rashford kulankii ugu dambeeyay uu kasoo muuqday xulkiisa qaranka England, Los Blancos ayaana u aragta inuu yahay badalka Cristiano Ronaldo, kaasoo kaga dhaqaaqay Juventus suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Real Madrid ayaa u qorshesay inay ku sameyso saxiixa da’ayarka Marcus Rashford aduun dhan £ 50m, kaasoo aanan xili ciyaareedkan waayo wanaagsan ku heysan la shaqeynta Jose Mourinho.
Los Blancos ayaa sidoo kale dooneysa inay lasoo saxiixato khadka dhexe kooxda Tottenham Hotspur Christian Eriksen, si uu u noqdo badalka Luka Modric, gaar ahaan xili laacibka reer Croatia uu ku dhow yahay in gabi ahaanba uu ka fariisto kubada cagta.
Real Madrid ayaa dooneysa in qiimo gaaraya 40 milyan oo ginni ay kaga soo qaadato Tottenham Hotspur saxiixa Christian Eriksen, xili heshiiska uu ku joogo Spurs uu dhacayo sanada 2020, islamarkaana uusan weli cusbooneysiinin qandaraaskiisa.
Tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa doonaya inuu helo weeraryahan cusub, kadib markii uu lumiyay sabarka xidigaha Karim Benzema iyo Gareth Bale, wuxuuna u arkaa in Marcus Rashford uu yahay saxiixa saxda ah ee lagu buuxin karo dhanka weerarka kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Garsoorka dhex dhexaadin doona kulanka La Liga ee kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona oo lagu dhawaaqay
Kooxaha la Xifaaltama Chelsea oo Maamulka Premier League ku Cadaadinaya in Baaritaano Culus lagu sameeyo Blues....(Maxaa lagu heystaa??)